Umbuso ulindele iimpepha zokubhubha kukaTantsi | Ilisolezwe
Umbuso ulindele iimpepha zokubhubha kukaTantsi
IBUTHO lophando ooKhetshe (Hawks) lizakuva kwiGunya-Bantu lezoTshutshiso malunga nomkhombandlela kwityala lobuqhetseba likamanejala waseMnquma uSindile Tantsi, obhubhe kwingozi yemoto kwiiveki ezintathu ezidlulileyo.
UTantsi wabhubha kwakunye noonogada bakhe ababini ngethuba imoto awayehamba ngayo yohlobo lweMercedes Benz, yathi yangqubana okweenkunzi zegusha nebhaki kwindlela ekufuphi naseHarding kumazantsi onxweme laKwaZulu Natal.
Umngcwabo kaTantsi waqhutyelwa kwikhaya lakhe eMachibini kuNtabankulu ngomhla wesixhenxe kule nyanga, apho iinkokeli zopolitiko eziquka uZweli Mkhize, Mlibo Qoboshiyane no-Oscar Mabuyane zaziyinxalenye.
Ebhubha nje uTantsi, ebejongene namatyala obuqhetseba abandakanya izigidi ngezigidi zeerandi, ekutyholwa ukuba uzibhunyule kumasipala waseMnquma. Wabanjwa kwakunye nosomashishini waseGcuwa uSive Nombembe.
Isithethi seeHawks kuzwelonke uBrigadiya Hangwani Mulaudzi uthi bazakulinda kwiNPA ngomkhomba-ndlela wetyala likaTantsi.
UMulaudzi uthi ityala ngakuNombembe lizakuqhuba njengesiqhelo.
Eli tyala lihlelelwe umhla wesibhozo kwinyanga ezayo.
Isithethi seNPA kwingingqi yempuma yaseMpuma Koloni, uLuxolo Tyali, uthi sisiqinisekiso sokubhubha sikaTantsi esiza kubanika umkhomba-ndlela wokuba bathini na malunga neli tyala.
UTyali uqinisekisile ukuba ityala ngakuNombembe lizakuqhuba ngokwesiqhelo.